ISIBINI SEMINYAKA ENGAMA-47 SIYA KWINTSHOLONGWANE EMVA KOKOYISA UMHLAZA IZIHLANDLO EZIBINI: EZIZODWA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Isibini seminyaka engama-47, abaphumelele umhlaza kabini, baya kwintsholongwane kwimbali yabo yothando lweethenda
Isibini seminyaka engama-47, abaphumelele umhlaza kabini, baya kwintsholongwane kwimbali yabo yothando lweethenda
UWanda noMarvin Brewington. Iifoto zentsholongwane. 2017. (Imifanekiso ngu-Amber Robinson)
Ngu: Esther Lee 12/06/2017 ngo-5: 30 PM
Uninzi lwabafoti bomtshato banethamsanqa ngokwaneleyo ukuba bangene kwintsholongwane, kodwa omnye uthe kutshanje wafumana uvuyo lokuba nemifanekiso yabazali bakhe- ayithathileyo- ukufumana amawaka ezabelo. Umfoti, Amber Robinson waseRaleigh, North Carolina, uthathe imithombo yeendaba zentlalo kwiveki ephelileyo ukuze babelane ngomzuzu wethenda phakathi kwabazali bakhe, Wanda kwaye UMarvin Brewington, ngubani ophumelele umhlaza kabini kwiminyaka yabo engama-47 betshatile. Kwi-caption, wenza inqaku ngebali labo elikhuthazayo lothando, eliye lasasazeka kwi-Facebook naku-Facebook Kwi-Instagram .
Kolu shishino lubalaseleyo lokuyila endikhe ndasebenza kulo, ndigxile kakhulu ekunikezeleni iiyure ezimbalwa ngemini yokufota okuhle, uRobinson uvakalise uLwesine we-30 kaNovemba ophelileyo. Ukunyaniseka, kunqabile ukuba ndiyeke ukucinga ngosuku, iiveki, iinyanga okanye iminyaka elandelayo yomtshato. Ke namhlanje ndabelana nawe ukuba ingaba le minyaka izakubonakala njani xa uthando lwenene lukhona. Aba ngabazali bam: batshatile iminyaka engama-47, boyisile umhlaza… kabini. Ndikhulise amantombazana amabini aphumeleleyo.
URobinson wapheleka iposti yakhe kunye neefoto zabazali bakhe bencumile emehlweni abo njengoko benxibe ii-nines-yena dapper isuti yenavy, uyakhazimla kwisinxibo segolide se sequin. Baye bahlupheka kunye kwaye bazizityebi kunye. Bondlile, bakhuselekile, kwaye bacebisa imiphefumlo emininzi elahlekileyo, uRobinson uqhubeke kwingcaciso. Bathanda ulindelo olungaphandle kwaye banikela ngesisa, nantoni na ekufuneka benikezele ngayo. Ndinebhongo kakhulu ukubabiza ngokuba nguMama noTata. Zizo iindawo apho ndizabalazela ukuba khona emtshatweni wam kunye nesikhumbuzo esingaguquguqukiyo sokuba umtshato lusuku nje, kodwa umtshato ungunaphakade.
Isithuba sakhe sokuhambisa sele sifumene ngaphezulu kwe-15,000 yezabelo kuFacebook, kunye nokuthandwa okungama-8,000 kwi-Instagram kunye namakhulu ezimvo ezivela kubasebenzisi. Asinakuze sicinge kwisigidi seminyaka ukuba impendulo kule mifanekiso iya kuba yile, utshilo uRobinson Ingcaciso ngokukodwa. Ndicinga ukuba sinoxinzelelo oluncinci ngendlela abaye bamkelwa ngayo kunye nendlela abantu abavela kwihlabathi liphela abaye bahlangana ngayo nemvakalelo yothando eboniswe kule mifanekiso.
Esi sibini sadibana okokuqala kwikholeji kwii-1960s, kwaye satshata kumsitho ongasemva kwendlu. UMarvin, 70, kwafunyaniswa ukuba une-multiple sclerosis kwiminyaka emithathu kuphela emva komtshato wabo. Uye walwa nomhlaza izihlandlo ezibini-eyokuqala, kwii-90s kunye neyesibini, kwiminyaka emine eyadlulayo. UWanda, 67, okwangoku, kwafunyaniswa ukuba unesifo sikaParkinson ngo-2014. Aba babini bazithatha ngokungathí sina izifungo zabo, bahlala omnye nomnye ekuguleni nasempilweni.
Esona sifundo sikhulu ndisifundileyo [kubazali bam] kukuba umtshato, nangona ungekho lula, uhlala uwufanele lo msebenzi, uRobinson uxelela iKnot. Umama notata bahlala besifundisa ukuba olona suku lubalaseleyo ebomini bakho kunye akufuneki lube lusuku lwakho lomtshato.
Wongeza ukuba injongo yokudubula yayisisizathu sokutya ngaphezulu kovuthayo. Ndidubula umama notata minyaka le kwikhadi labo leKrisimesi kwaye kulo nyaka bekungafani, utshilo. Ekuphela kwento esigqibe ekubeni siyenze ngokwahlukileyo ebesikhe sayenza ngaphambili, kukwenza iimpahla zisemthethweni.
URobinson ucofe abathengisi ababini asebenza nabo kubaxhasi bakhe ukuze baphathe iinwele kunye nenxalenye yokwenza. Xa sixelele uMelissa noTish ukuba siceba ukwenza i-glam yeholide, ngokuqinisekileyo bebekhwele, uyongeza, kuba bayamthanda umama notata.
loluphi uhlobo olupheleleyo lwe-rsvp ngesiNgesi
uphi umnwe weringi
Izinto ezimnandi zenziwa kwisan antonio kwizibini ezitshatileyo
isuti eluhlaza okwesibhakabhaka izihlangu zomtshato
emnyango intsingiselo imibala
uthumela nini ugcine imihla